Taariikhda isdilkii ugu tirada badnaa ee 900 oo qof ay hal mar is dileen - Bulsho News
Shiinaha: Nin cirwayni darteed looga mamnuucay makhaayad
'Marka uu codka iga lumay ayaan ogaaday inuu kaansarka naasaha...
Xiliyadan ayaa ku beegan sanad guuradii 43-aad ee kasoo wareegtay isdilkii ugu balaarnaa ee taariikhda casriga ah, kaasoo galaaftey nolosha 913 qof, oo ay ku jiraan illaa iyo 300 oo qof oo dadoodu tahay 17 sano jir ama ka yar, kuwaasoo u dhintey cabista ama qaadashada sunta.
Buugga sida gaarka ah loogu kaydiyo taariikhda ee Encyclopedia Britannica, waxa uu ku qoran, in wakhtigan oo kale markii ay taariikhdu aheyd bishii November, ee sanadkii 1978, magaalada ay ku dhaqnaayeen dadka beeraleyda ah ee Jonestown, oo katirsan jamhuuriyadda Guyana, ee dhacda dhanka koonfureed ee Qaaradda America, ay ka dhacdey dhacdo is miidaamin ah, oo lagu diley xubno katirsan dariiqada macbadka People’s Temple, taasoo fadhigeeda weyn uu yahay gobolka California ee dalka Mareykanka. Amarkan ayaa waxaa bixiyey hoggaamiyahooda firqadan, oo la oran jirey Jim Jones.
Waa maxey taariikhda Jim Jones, iyo dhankiisa cibaadada?
Ninka la yiraahdo Jones, wuxuu furey kaniisaddiisii ugu horeysay bartamihii 1950 meeyadii, isagoo markaa ka yagleeley Indianapolis. Waqtigaas ma uusan ka tirsaneyn koox gaar ah, mana laheyn tababar uu ku gudbin karo diintiisa.
Kaniisadiisa waxey ku guuleysatey hanaanka is dhexgalka jinsiyadeed, oo ay sumcad ku heshay, taasoo uu si gaar ah ugu soo shaac baxey horumarna uu ka sameeyey, Jones, qudhiisa wuxuu ahaa nin caddaan ah. Sanadkii 1960-kii, macbadkii Jones, oo markaas loo yaqaan macbadkii dadka, wuxuu xiriir la lahaa xerta katirsan diinta Kiristaanka, afar sano kadib, Jones, ayaa loo magacaabey inuu hoggaamiyo kaniisada.
Bartamihii 1960-meeyadii, isaga iyo xaaskiisa Waa Jones-see, waxey u guureen machadka la yiraahdo Dadka California, waxeyna dageen meel ka baxsan Ukiah, oo ay guuritaan kaasna ay ku wehliyaan dad 100 qof gaaraya, kuwaasoo aaminsan in haddii uu dhaco dagaal hubka wax gumaad ah ee Niyukliyeerka ah, in kaniisadan ay badbaadin karto.
Sannadkii 1970-kii, Jones, wuxuu bilaabey inuu ku cibaadeysto ku tukado San Franciso, halka 1972-dii, laga furey macbad kale magaalada Los Angeles.
Jones ayaa sameeyey dadaal uu saaxiibo kusoo jiidanayo, gaar ahaan siyaasiyiinta gobolka California, iyo sidoo kale suxufiyiinta, waxey noqotey kaniisaddiisa mid la ixtiraamo. Kumanaan dad taabacsan ayaa kusoo xirmey kaniisadda, kuwaasoo intooda badan ay ahaayeen dad madow oo African-ka Mareykanka ah.
Baadari British ah, oo si been abuur ah loogu eedeeyey xadgudub dhanka galmada carruurta ayaa is dal daley, iyadoo macbadka uu si weyn uga qeyb qaadanayey arrimaha bani’aadanimada dadka ee bulshooyinka maxaliga ah. Sida uu u dhayo Jones quluubta dadka taabacsan waxey aheyd arrintan ku weyn kaniisaddiisa.
Xubno katirsan kaniisadda, ayaa si joogto ah loo bahdiley, loo gacan qaadey, oo la aflagaadeeyey, in badan oo kamid ahna waxaa lagu qasbay ama maskax ahaan laga dhaadhiciyey in hantidooda oo ay ku jiraan guryahooda, iney u saxiixaan kaniisadda.
Dadka Madowga qaarkood, iyo xubno ka tirsan kooxaha kale ee laga tirada badan yahay, waxey ku qanceen in haddii ay ka haraan ku xirnaanta kaniisadda People, in lagu xiri doono xeryaha dadka lagu daawado, oo ay maamusho dowladda.
Qoysaska waala kala irdheyn jirey, iyadoo laga dalban jirey midba midka kale inuu soo jaajuuuso. Sida laga soo xigtay buuga lagu kaydiyo taariikhda ee Encyclopedia Britannica.
Sanadkii 1977-dii, waxey wariyeyaashu bilaabeen iney wax iska weeydiiyaan dhaqamada Jones, wuxuu ula guurey magaalada Jones Town dhawr boqol oo qof, oo isaga taabacsan, halkaasoo ku taalla dalka Guyaha, waxeyna dhismaha kaniisadda halkaasi ku qaadatey 3 illaa iyo 4 sano.
Ilo diblomaasiyadeed oo dhanka safaaradda Mareykanka ee dalka Guyaha, ayaa usoo gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, markii ay taariikhdu aheyd bishii June ee sanadkii 1978-dii, wax ay ku macneeyeen is maamul hoosaad, uu ninkii Jones ahaa markii danbe halkaasi ka sameystay.
Intii lagu guda jirey safar shaqo oo ay halkaasi ku tageen xubno kasocda safaaradda, ayaa waxaa la ogaadey in maamulka dowladda hoose ee magaalada Jones Town, in aaney waxba kala socon dhaq dhaqaaqa dadka ku dhaqan magaaladani, iyo ajandaha ninkan kusoo biirey, taasoo muujisay sida ay ugu hirgashay goob madax bannaan oo uu raadinayey ninkii Jones.
Xogta laga helay safaaradda, ayaa intaa ku dartey, in sababaha kale ee ugu wacan arrinkani iney tahay in dhulka laga hadlayaa uu yahay mid ka fog goobaha uu maamulka dowliga ku xoog badan yahay. Maamulka dowladda ayaa markiisii horaba waxa uu la daalaa dhacayey adeegyada ay tahay inuu siiyo muwaadiniintiisa.
Xubnaha deegaanka, waxey u muuqdaan kuwo illaa iyo xad isku filan, oo aanan baadi goobin xiriir dibadda ah oo balaaran, oo ay la yeeshaan deegaanada ku hareereysan goobaha ay dagaan.
Safaaradda ayaa intaa ku dartey in Guyaha dadka kusugan ay yihiin bulsho dad Mareykan ah, oo u jirta sidii unug iskood isku maamula, oo isla markaana ku nool kuna dhaqmaya dal shisheeye.
Bishii November, ee sanadkii 1978-dii, Leo Ryan, oo katirsan aqalka congress Mareykanka, ayaa u safray Guyana, si uu usoo indha indheeyo dhaq dhaqaaqa kaniisadda dadweynaha ee magaalada Jones town.
Xigashada Sawirka, CLAIRE JANARO VIA JONESTOWN INSTITUTE
Xildhibaanka ayaa baarayey warar la isla dhex marayey oo sheegaya in qaar kamid ah ururka ama ku xiran kaniisadda in halkaasi lagu hayo iyagoo aan raali aheyn, qaarkoodna loo geysto tacadiyo jireed mid nafsi ah, kagadaal markii xubno katirsan qoys kamid ah ururkaasi oo kunool dalka Mareykanka, ay walaac ka muujiyeen in eheladooda lagu haysto iyaga magaaladani, iyagoo aan raali ka aheyn.
Mid kamid ah kiis si weyn loo hadal hayo, waalidka dhaley wiil lagu magacaabo John Victor Stoen, ayaa dalbadey in lasii hayo kadib markii ay kala tageen qoyska, Jones waa uu diidey inuu dhiibo ilmaha yar, isagoo ku andacoonaya inuu yahay aabihiis.
Ka gadaal markii uu soo gaarey magaalada GeorgeTown, ee dalka Guyana, Ryan ayaa afka aadiyey si toos ah xarunta kaniisadda ee ku taalla magaalada Jonestown.
Intii uu ku guda jirey safarka shaqo, ninkii ka tirsanaa congress-ka oo ay la socdaan qaraabada xubno katirsan kaniisadda, iyo sidoo kale suxufiyiin doonayey iney tabiyaan safarka shaqo iyo walaaca ay dadku qabaan.
Kadib iska caabin iyo is jiid jiid dheer kadib, kooxdii safarka ku timid waxaa loo oggolaadey iney gudaha u galaan kaniisaddii, ayna soo eegaan qeyb walba, si ay u helaan sawir guud oo kusaabsan nolosha maalinlaha ah ee kooxdani, si ay usoo bandhigaan.
Wararkii la isla dhex marayey iyo kuwii ay sheegayeen qaraabadda dadkooda ay goobta ku jiraan, ayaa lagu arkey kaniisaddii iyo magaaladiiba, ma jirin qof u muuqdey mid gaajoonaya, dadkuna kuma jirin qof xanuunsanaya, sida uu sheegya wariye katirsan wargeyska The Washington Post, oo qeyb ka ahaa safarkaasi.
Kooxdii safarka ku timid waxey ku hoydeen bannaanka dhismaha, waxey kunoqdeen dhismihii maalintii xigtay. Intii ay halkaa kusugnaayeen, kooxda waxaa lasoo xiriirey 12 qof oo taabacsan kaniisadda, kuwaasoo dalbadey iney dib ugula noqonayaan marka ay iyagu ku noqonayaan dalka Mareykanka.
Intii uu xildhibaan Ryan, isku diyaarinayey dib ugu noqoshada Mareykanka, xubno kala duwan oo katirsan kooxdii taabacsaneyd kaniisada, kuwaasoo doonayey iney isaga tagaan xaruntii ay ku jireen, ayaa soo raacey baabuurta wefdigii xildhibaanka, si uu isagoo ilaalinaya dib ugu celiyo Mareykanka.
Xildhibaan Ryan, ayaa waxaa weerar ku ekeeyey xubno katirsan kaniisadda, wax yar kahor inta aanu baabuurta kolonyeysan, oo aaney ka bixin xaruntii, laakiin wuxuu ka baxsadey goobtii isagoo aanu wax dhaawac ah soo gaarin, isagoo xildhibaanku uu safarkiisa sii watey.
Intii ay wafdiga sugayeen dayuuraddii dib u celin laheyd, dabley kamid ah firqada kaniisadda, ayaa soo weerarey wafdigii, iyagoo xabado hawada ku furey, markii Ryan ay kooxdiisii ay doonayeen iney amba baxaan. Waxaa halkaasi lagu diley shan qof, oo uu kujiro xildhibaan Ryan, iyo saddex wariye, iyadoo halkaasi ay ku dhaawacmeen 11 qof oo kale.
Markii ay dhacdey masiibada, Jones, ayaa kala hadley dadkii taabacsanaa ee kusugnaa xarunta bannaankeeda, iney iyaga nafta iska qaadaan.
Waxyar kadib, Jones, ayaa dalbadey in lagu dhaqaaqo go’aanka uu gaarey ee ah “Isdilka wadareedka Kacaanka” ee dadkii ku jirey xarunta, taasoo ay xubnaha taabacsani ninkani ay kal hore fuliyeen is dilista noocaan oo kala ah.
Xaaladdan oo kale, dadka badbaada waxey dib u xusuustaan dhacdooyinka soo mara habeen waliba, qaarkood toddobaad, maadaama ninkii Jones ahaa uu ku dhawaaqey go’aan, taasoo ka dhalatey xiisad lasoo daristay xarunta.
Mararka qaarkood habeenada waxaa kamid ahaa is dilid oo dad badan ah, oo ay si aan ka fiirsi laheyn u sameynayeen dadka taabacsan kaniisada, oo ay ku jiraan caruur, kuwaasoo ku jira safar. Waxaa la siinayey dadka cabitaano, iyagoo loo sheegay in cabitaanadani ay ku jiraan sun, si bal loo eego heerka ay gaarsiisan tahay daacadnimadooda.
Runtii waxaa la diyaariyey cabitaano khudaar ah, oo ay ku jiraan dawooyin halis ah, iyadoo mrakaa kadib loogga shubayey caruurta iyo kuwa markaa dhashey afka, halka markii danbana ay cabayeen dadka waa weyn, markani maa aheyn tijaabo iyo imtixaan.
Arrintan ayaa timid kadib markii Jones uu uga digay dadkii taabacsanaa in ciidamada Guyana ay soo weerari doonaan xarunta, ayna kaxeysan doonaan carruurta, sababo la xiriira weerarkii iyo toogashii ka dhacdey garoonka diyaaradaha.
Jones qudhiisa ayaa u dhintey dhaawac kasoo gaarey rasaas.
In kayar boqol kamid ah dariiqadii taabac saneyd Jones ee kusugneyd Guyana ayaa badbaadey, inta badan dadkii badbaadey ayaa ka goostay xarunta, ama waxey joogeen magaalada Georgetown.
Saraakiisha ayaa markii danbe waxey heleen hub kayd ah, boqollaal baasaboorro ah, oo la is dul saarey, iyo US $500,000. Kaniisadda dadka, ayaa gabi ahaanba la kala direy dhacdadani kadib.
Hal nin oo kamid ahaa culumada kaniisadda, Larry Leighton, ayaa lagu maxkamadeeyey gudaha dalka Mareykanka, sababo ku lug lahaansho dhacdadani.
Xigashada Sawirka, THE JONESTOWN INSTITUTE
Layton, ayaa lagu helay dambi ah inuu maleegay, gacanna ka geystay dilka Ryan, iyo isku daygii dilka sargaalka safaaradda Mareykanka ee Guyana, Richard Dwyer, waxaa lagu xukumey xabsi daa’in. Waxaa lasii daayey sanadkii 2002-dii.
Xubin kale oo katirsanaa kaniisadda, Charles Beckman, ayaa qirtey dambiga ah inuu isku dayey dilka gabadh, waxaa lagu xukumey shan sano oo xarig ah dalka Guyana.
Dhanka badbaadada ee sheekadan
Mid kamid ah dadkii ka babaadey dhacdadani, Laura Johnson Cole, ayaa BBC-da kala hadashey, sida ay si dirqi ah uga badbaadey dhimashada, iyo sida ay dib mar kale ugu dhistay nolosheeda tobankii sano ee ka dambeeyey.
Cole waxey ku nuux nuux satey iney ku kortey magaalada caasimadda Mareykanka ee Washington, DC, sanadihii 1950-kii illaa iyo 1960-kii.
Sanadkii 1970-kii, markii ay ku biirtey kaniisanada Dadka ee Jones ee ku taalley gobolka California, waxey dadeedu aheyd 22 sano jir, waxey kamid aheyd koox la oran jirey Sunta Ilmada, iyadoo kasoo horjeeday dagaalkii Mareykanka io Vietnam ku dhex marayey dalka Vietnam, kaasoo ay dad badani ku hoobteen. Waxey la shaqeysay qolada la yiraahdo Black Panthers, iyadoo ka qeyb gashey bandhigga caanka ah ee Woodstock, kaasoo dhacey sannadkii 1969-kii.
Maskaxdeyda iyo nolosheeda waxaa galey khalkhal, guurkiina waa uu fashilmay, waxaan raadiyey meel aan ka helo deegaan nabdoon, kadib markii aan heerar kala duwan oo go’aamo xun aan soo marey, ayey tiri.
by 27 seconds ago 27 seconds ago
Shil Gaari Dad Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay...
Ciidamada ammaanka Suudaan oo toogasho ku dilay 15...
Dawladda Hoose Ee Hargaysa Oo Maanta Fulisay Olole...
Man City Oo Guul Ay U Qalantay Kala...
Maxaan Ka Baranay Guushii Man City Iyo PSG...
Michael Carrick Oo Shaaca Ka Qaaday Qorshaha Uu...
Tababaraha Ajax Ee Erik ten Hag Oo Go’aan...
Waxa Uu Cristiano Ronaldo Haatan Doonayaa In Uu...
RASMI : Barcelona Oo Shaacisay Mudada Uu Aguero...